टिकटक - Aarthiknews
यूट्यूबले टिकटकको नयाँ प्रतिस्पर्धीको रूपमा भारतमा आफ्नो नयाँ एपको बीटा संस्करण परीक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ। बीबीसीका अनुसार यूट्यूब सर्ट्स नामक उक्त एपमा १५ सेकेन्डको भिडिओ बनाउन मिल्नेछ र तिनको...
टिकटक खरिदमा माइक्रोसफ्ट हिस्सियो, ओराकलले मार्ला त बाजी ?
लोकप्रिय चिनियाँ भिडियो–सेयरिङ एप्लीकेसन टिकटकले आफ्नो अमेरिका व्यवसाय अमेरिकी कम्पनी ओराकललाई बिक्री गर्ने संकेत दिएको छ । टिकटकको अमेरिका व्यवसाय खरिद गर्ने बारेमा माइक्रोसफ्टसँग लामो वार्ता भए पनि अन्ततः त्यो...
भूराजनीतिक चासोका बीच संसारका शक्ति राष्ट्रहरू एउटा चिनियाँ एप टिकटकप्रति सशंकित भएका बेला नेपालमा पनि उक्त एपको उपयोगिताबारे अध्ययन भइरहेको बताइएको छ। नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले...
टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने समय पर सार्दैनः ट्रम्प
अमेरिकाले चिनियाँ कम्पनीको उत्पादनका एप्लिकेसनहरुका साथै केही समय यतादेखि चर्चित मुद्दा बनेको टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टिकटकसहितका चिनियाँ एप्समा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको जानकारी...
भारतमा फेरि टिकटक खोल्ने तयारी
भारतमा फेरि टिकटकको प्रतिबन्ध हटाएर चलाउने तयारी गरिएको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार टिकटक भारतीय एसेटलाई जापानी कम्पनी सफ्टबैंकले किन्न लागेको हो । ...
टिकटकले बिथोल्यो इन्टरनेट
टिकटक नेपालमा त्यति नै चर्चित र लोकप्रिय छ, जति फेसबुक । टिकटकको यो लोकप्रियता छ महिनायता झन् बढ्दो छ । ‘लकडाउन’ले घरभित्रै रहँदा धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि टिकटक समय गुजार्ने...
मंगलबार पनि भएन टिकटकको किनबेच, ट्रम्पलाई अफ्ठेरो पार्ने चीनको तयारी
अमेरिकाका दुई वटा स्थापित कम्पनीहरू माइक्रोसफ्ट र वालमार्टले टिकटक किन्ने तयारी गरेका थिए । उनीहरूबिच मंगलबार किनबेच हुने भनेर सिएनबीसीले सोमबार समाचार लेखेको थियो । तर, मंगलबार त्यस्तै कुनै कारोबार...
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लखेट्न खोजेको चिनियाँ स्वामित्वमा रहेको लोकप्रिय भिडिओ एप ‘टिकटक’ अमेरिकी दुई कम्पनीले किन्ने भएका छन् । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय रिटेल कम्पनी ‘वालमार्ट’ ले अर्को अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी...
लोकप्रिय चिनियाँ भिडियो सेयरिङ एप्लिकेसन टिकटकका कार्यकारी प्रमुख केभिन मायरले राजीनामा दिएका छन् । केही महिनाअघि मात्र कम्पनीको प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त भएका मायरले कम्पनी छाड्नुपर्दा आफूलाई निकै दुःख लागेको बताएका...
टिकटकमा ट्राफिक बढेपछि घटाउन थालियो गुणस्तर
छोटो भिडियो सेयरिङ गर्ने चिनियाँ एप केही सातायता विवाद र चर्चाको केन्द्रमा छ । भारत र अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण देखाउँदै यो एपलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् । ...
भारतमा टिकटक चलाउनेबारे छलफल हुँदै
चीनमा आधारित बाइटडान्सले भारतमा टिकटकको व्यवसायलाई अगाडि बढाउन र सपोर्ट गर्नका लागि रिलायन्स इन्डस्ट्रीजसँग प्रारम्भिक छलफल शुरु गरेको छ । गत महिना भारत सरकारले टिकटकसहित थुप्रै चिनियाँ एप्स (अनुप्रयोगहरू)...
टिकटकको मूल्य कति होला ? यसको तीव्र वृद्धि र ठूलो संख्यामा रहेका प्रयोगकर्तालाई हेरेर धेरैले यो एपको मूल्य ५० अर्ब डलर नजिकसम्म आँकलन गरिएको छ । छोटो भिडियो शेयरिङ यो...
राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले कुनै अमेरिकी कम्पनीले टिकटकको अमेरिकास्थित कार्यालय नकिने टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिने चेतावनी दिएका छन्। दशौँ लाख प्रयोगकर्ताहरूले रुचाएको यो एप दुई वर्षभित्रै कसरी अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा बन्न...
अमेरिकाकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टिकटक र वी च्याट बन्द गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। टिकटकको कम्पनी बाइटडेन्ससँग कारोबार प्रतिबन्ध गर्ने कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रपति...
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले टिकटकले अमेरिकामा गर्ने व्यवसाय अमेरिकी संस्थाले किनेमा त्यसबाट अमेरिकी सरकारले पैसा पाउनुपर्ने बताएका छन्। ट्रम्पले आफूले माइक्रोसफ्टको उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग सप्ताहान्तमा फोनमा कुराकानी गर्दा खरिद रकमको राम्रो...
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ नागरिकको स्वामित्वमा रहेको लोकप्रिय भिडियो सेयर एप्लिकेसन टिकटक अमेरिकी कम्पनीलाई बिक्री गर्न ६ हप्ताको समयावधि दिएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले टिकटकलाई अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउने...
अब भने अमेरिकाले टिकटकलाई नलखेट्ला की ?
चीनीयाँ भिडियो सेयरिङ एप टिकटकको माइक्रोसफ्टले अमेरिकाका लागि अधिकार किन्ने तयारी थालेको छ। माइक्रोसफ्टका कार्यकारी निर्देशक सत्य नन्डेलाले आइतवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको वार्तामा उक्त जानकारी दिएका हुन्। ...
भारतले टिकटक र युसी ब्राउजरलगायत ५९ ओटा चिनियाँ एप्सहरु प्रतिबन्ध लगाएको केही दिनपछि आमेजोन कम्पनीमा यस्तो निर्णय आएको हो । सार्वभौमिकता, अखण्डता र प्रतिरक्षाको लागि यो निर्णय गरिएको न्युयोर्क टाइम्सले...
टिकटक लगायत ५९ वटा चिनियाँ एपमाथि भारतले प्रतिबन्ध लगाएको कामको अमेरिकाले प्रशंसा गरेको छ । बिहीबार अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले भारतको कदमको स्वागत गरेका हुन् । टिकटक लगायत चिनियाँ एप्क...
भारतले टिकटकसहित ५९ चिनियाँ एपमा प्रतिबन्ध लगायो
भारतले टिकटकसहित ५९ चिनियाँ एपमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार एक सूचना जारी गर्दै चीनमा निर्माण भएको टिकटकसहित अन्य ५९ एपहरुमा रोक लगाइएको जनाएको हो । ...
विश्वमा नै गैर ग्याम एस डाउनलोड गर्ने मध्ये टिकटक पर्ने गरेको छ । विश्वमा सबैभन्दा धेरै एस डाउनलोड हुनेमा वाट्सएप रहेको छ जुन ७०.७४ करोड डाउनलोड भएको छ । त्यसपछि...
टिकटकले पनि स्मार्टफोन बनाउने
चीनको आर्थिक पत्रिका कैजिङका अनुसार बाइटडान्सको नयाँ मोबाइल २०२० को सुरुवातमा सार्वजनिक हुनेछ । ...
टिकटक बनाउनेले अब मोबाइल बनाउने
‘भिडियो–शेयरिङ एप’को रुपमा अत्यन्त लोकप्रिय टिकटकको निर्माता बाइट–डान्सले मोबाइल निर्माणको व्यवसाय सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । टिकटक पछिल्लो समय सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भएको समाजिक सञ्जाल एप हो...